Mgbasa ozi n'ịntanetị: gịnị ka ọ bụ na ụdị ụdị iji eCommerce | eCommerce ozi ọma
Mgbe ị nwere eCommerce, ma ọ bụ ibe weebụ, ị maara na mgbasa ozi n'ịntanetị dị ezigbo mkpa n'ihi na, site na ya, ị nwere ike ime ka ndị ọrụ mara gị, gaa leta gị na ee, ha na-azụkwa n'aka gị. Ma nke a adịghị mfe.
You mara n'ezie gịnị bụ mgbasa ozi n'ịntanetị? Na ụdị ndị dị? Ọ bụrụ na ị na-atụle ya ugbu a, lee, anyị na-enye gị igodo ka ị ghọta ya 100% wee mara nke kachasị kwesịrị maka azụmahịa gị.
1 Gịnị bụ mgbasa ozi n'ịntanetị
2 Uru na ọghọm nke mgbasa ozi n'ịntanetị
3 Ofdị mgbasa ozi n'ịntanetị
3.1 SEM ma ọ bụ mgbasa ozi nyocha
3.3 Mgbasa ozi vidio n'ịntanetị
3.4 Mgbasa mgbasa ozi mgbasa ozi
3.6 Mgbasa ozi na ekwentị
Gịnị bụ mgbasa ozi n'ịntanetị
Ihe mbụ ị kwesịrị ịma gbasara mgbasa ozi n'ịntanetị bụ na echiche ya na-agbanwe, dịka mpaghara ebe ọ na-arụ ọrụ, ịntanetị. Anyị nwere ike ịkọwapụta mgbasa ozi n'ịntanetị dị ka "Mgbasa ozi ndị e zigara ndị na-ege ntị na-eji forntanetị maka nzube a". N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha bụ mgbasa ozi na-abịakwute anyị na tontanetị iji kpọsaa azụmahịa, isiokwu, ụdị, wdg. nke otu ụlọ ọrụ.
Na mbu, amaghi mgbasa ozi n'ịntanetị, n'eziokwu, mmadụ ole na ole na-abanye na ya ghọrọ ndị ọsụ ụzọ, mana dịka Internetntanetị na-ejupụta n'ụlọ na ọrụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ itinyekwu ego na mgbasa ozi ịntanetị karịa nke anụ ahụ, n'ihi na ị nwere ike iru ìgwè buru ibu, karịchaa ma ọ bụrụ na ha mere nke ọma.
Uru na ọghọm nke mgbasa ozi n'ịntanetị
Tụle ihe mgbasa ozi n'ịntanetị bụ, obi abụọ adịghị ya na ọ chụpụrụ mgbasa ozi na-adịghị n'ịntanetị, ma ọ bụ nke anụ ahụ. Kaosiladị, ihe niile nwere akụkụ ya dị mma na akụkụ ya dị njọ.
N'ihe banyere uru nke mgbasa ozi n'ịntanetị I chere ihu na physics, ị ga - ahụ:
Ozi nke ruru otutu mmadu. Akụkụ ya buru ibu buru ibu, megidere akwụkwọ mpịakọta nke ga-erute obere akụkụ nke ndị na-ege ntị.
Ohere iji tụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Na mgbasa ozi na-adịghị n'ịntanetị ị ga-echere iji hụ mmeghachi omume ndị mmadụ; n'ịntanetị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ahụ iji nweta nha iji mata ma ọ bụrụ na ọ ziri ezi, a ga-agbanwe ya ma ọ bụ, n'ụzọ megidere, a ga-ewepụ ya.
E nwere nkwurịta okwu na ndị mmadụ. Nọmalị site na netwọk mmekọrịta, nke bụ ebe ọtụtụ na-aga ugbu a iji nwee ike ịza ajụjụ banyere ihe ha na-eme ma ọ bụ na-ahụ.
Ugbu a, ọ bụghị ha niile bụ ezigbo ihe. Have ga-akwado ya na mgbasa ozi n'ịntanetị ka:
Gakwuru naanị ndị na-eji Internetntanetị. Ọ bụ ezie na ndị pere mpe na ndị anaghị eme ya, enwere ike ndị na-ege gị ntị anọghị ebe ahụ, ị ​​ga-ejikwa ọwa mgbasa ozi ndị ọzọ.
N'ịbụ ndị dị na saturation nke mgbasa ozi dị otú ahụ, ndị ọrụ na-eleghara mgbasa ozi ahụ anya. Nke a bụ ihe nkịtị, ọkachasị ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-akpọsa ihe na-eme ka ndị ọrụ kwụsị ilekwasị anya na akụkụ ndị masịrị ha ma hapụ ndị ọzọ.
Enweghị clic. Nke a bụ n'ihi mgbasa ozi na-eduhie eduhie nke na-eduga na weebụsaịtị ndị a na-apụghị ịdabere na ya, nchọpụta nje virus, wdg. Nke ahụ na-eme ka kọmputa na ọdịnaya mebie, yabụ ọtụtụ anaghị pịa ọkọlọtọ ma ọ bụ mgbasa ozi maka egwu nke a.
Ofdị mgbasa ozi n'ịntanetị
Mgbe ị nụrụ gbasara mgbasa ozi n'ịntanetị, ihe kachasị mma bụ na ị na-eche banyere ọkọlọtọ ịchọrọ ịchọta na ntanetị, ma ọ bụ site na ibe ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta. Agbanyeghị, ị maara na a na-ewere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịka mgbasa ozi n'ịntanetị?
SEM ma ọ bụ mgbasa ozi nyocha
Ọ bụ ụdị nke mgbasa ozi nke na-eji Keywords ọchụchọ Mgbasa ozi, ya bụ, isiokwu nke kwụọ ụgwọ iji kpọsaa ha ma si otú ahụ rute ọtụtụ ndị ọrụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọ na peeji mbụ nke engines ọchụchọ, dị ka Google.
Iji nye gị echiche, ha bụ njikọ mbụ nke na-apụtakarị, mgbe ụfọdụ ịmeghachi, mgbe ị na-eme ọchụchọ, kamakwa ndị na-egosi na kọlụm ziri ezi nke igwe nyocha, ma ọ bụ na Shozụ ahịa Google.
Ọkọlọtọ mara nke ọma n'ihi na ọ dịla ogologo oge. Ọ bụ ihe oghere a haziri nke ọma iji kpọsaa ibeay, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, tinyekwara njikọ n'ụzọ dị otu a, site na ịpị ya, ọ na-akpọrọ anyị gaa na ibe weebụ ebe ịchọrọ (nke na-abụkarị nke metụtara ọkọlọtọ ahụ n'onwe ya).
Mgbasa ozi vidio n'ịntanetị
Ma ọ bụrụ na tupu anyị na-ekwu banyere mkpọsa ochie, ugbu a anyị na-ekwu maka nke oge a. A na-ahụta nke a ịbụ otu n'ime ike kachasị dị adị ma enwere ike ịgụnye ya na usoro mgbasa ozi ọ bụla, ma ọ bụ site na email, site na netwọkụ mmekọrịta, na ọkọlọtọ ...
Mgbasa ozi vidiyo na-enweta na-adọta ihe karịrị ọkọlọtọ ugbu a (n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-eleghara ha anya mgbe ha hụrụ ha). Ọ na-ewetakwa nnukwu ikike, na n'ọtụtụ oge ịbịaru ụlọ ọrụ nso.
Ọbụghị naanị ọkọlọtọ, ka enwere, mana anyị na-ekwu maka ya usoro ụlọ ọrụ na usoro nke ụlọ ọrụ iji kpọsaa. Kedu ihe ga-abụ usoro ahụ? Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, na ibe ụlọ ọrụ gị, tinye ngwaahịa ịchọrọ ịre, ma ọ bụ kpọsaa ụlọ ọrụ gị. N'ihe banyere ndị na-enweghị isi, ọ bụ karịa ihe niile iji ndị na-akwado ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike gosipụtara ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ ma kwuo maka ya, ma ọ bụ banyere ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya.
Tinyere ọkọlọtọ, ịre ahịa email emewokwa ochie, ọ bụ ezie na ị ga-ama etu esi eji ya nke ọma iji zere ịbụ ndị a na-ewere dị ka spam ma ọ bụ igbochi akaụntụ gị, nke ga-aka njọ. Ọ bụrụ na ị kpachara anya, ọ nwere ike ịbụ mgbasa ozi ga - ewetara gị ọtụtụ elele, ebe ị nwere ike ziga ozi nkeonwe nye ndi n’ere ahia ma si otú abata na oge kacha mma maka ha (iji dozie nsogbu).
Mgbasa ozi na ekwentị
Na mgbasa ozi mkpanaka anyị na-ezo aka SMS nke ụfọdụ ewepụla ịbụ naanị mgbasa ozi. Otú ọ dị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ na-ala azụ n'ụdị mgbasa ozi dị n'ịntanetị, eziokwu bụ na ọ na-arụ ọrụ.
Ihe kariri 95% nke ozi ndi a ka aguru n’ime nkeji oge anata ha, otutu n’ime ha na enweta mmekorita.
Anyị enweghị ike ichefu banyere mmapụta gbasie dị ka mgbasa ozi n'ịntanetị. Ugbu a, ọ bụ ezie na a na-aga n'ihu na-eji ya, ma na-abawanye ụba, a ga-ekwukwa ya ọ bụ ihe kacha njọ na iwe na mgbasa ozi niile.
Eeh, ị ga - eme ka ha hụ gị, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere ike mebie ibe ahụ maka na ha chọrọ imechi mmapụta ma mechie ihe nchọgharị ahụ, ma ọ bụ na ha nwere iwe site na nkwụsịtụ ma achọghị ịga n'ihu ebe ha no.
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ọtụtụ ụdị mgbasa ozi n'ịntanetị na nke ọ bụla otu ma ọ bụ nke ọzọ ga-arụ ọrụ ka mma. Ugbu a ọ bụ oge iji nyochaa eCommerce gị iji mara nke n'ime ihe niile nwere ike ịka mma itinye ego na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Mgbasa ozi n'ịntanetị